Home Wararka Axmad Madoobe oo maanta soo xulanaya qaar kamida kuraasta Aqalka Hoose
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee maamulka Jubbaland ka dhacdo xulashada lix kursi oo kamid noqonaya kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee federaalka Soomaaliya.
Kuraasta xulushada ee maanta ka dhaceyso magaalada Kismaayo ayaa inta badan natiijadooda lasii ogyahay, waxaana ku tartamaya musharaxiin la wato iyo kuwa iyana ay malxiis ahaan usoo wateen.
Waxaa xudis mudan in kuraastan maanta xulashada ka dhaceyso magaalada Kismaayo aysan qeyb ka aheyn tartanka xildhibaanadii horey ugu fadhiyay lixda kursi ee maanta la dooranayo.
Maamulka Jubbaland ayaa la sheegay in ay ka reebeen in kuraastan mar kale u tartamaan xildhibaanadii horey ugu fadhiyay oo u badnaa kuwa siyaasad ahaan kasoo horjeeday Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Axmad Madoobe ayaa horay u balan qaaday in ka soo xulayao Kismaanyo xildhibaano isaga ka amar qaata meesha uu u dirana aadaya.
Halkan ka Akhriso kuraasta maanta la dooranayo in xildhibaanada ku tartamaya
#Hop107 Waxaa ku tartamaya Maxamed Sheekh Nuur Cismaan iyo Xasan Cismaan Aadan iyadoo hore ay ugu fadhiday Xaawo Maxamed Aadan.
#Hop114 Waxaa ku tartami doona doona Cumar Ibraahim Xaashi iyo Cabdi Aadan Cabdullaahi,hase yeeshee waxaa kursigan hore ugu fadhiyay Cabdulqaadir Maxamed Cismaan oo laga reebay inuu tartamo.
#Hop120 Waxaa ku tartami doona Asad Cabdirisaaq Maxamed iyo Saciid Cabduqaadir Shukri, iyada oo meesha laga saaray Xildhibaankii horay ugu fadhiyay ee C/qaadir Sheekh Cali Ibraahim (Baqdaadi) .
#Hop111 Waxaa ku tartamaya kursigan Cabaas Cali Ibraahim iyo Aadan Mursal Cadoow waxaana laga reebay Maxamed Nuur Iftin Shambara oo hore ugu fadhiyay kursigan.
#Hop 028 Waxaa ku tartami doona kursigan oo la siiyay shahaadada Cabdinuur Cali Aadan iyo Axmed Cabdi Maxamed iyadoo uusan ka mid ahayn musharaxiinta tartamaya xildhibaankii hore ugu fadhiyay Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir.
#Hop 093 Waxaa ku tartami doona kursigan Saciid Maxamed Cali iyo Mahad Nuur Xaaji Cismaan iyadoo uusan musharaxiinta ka mid ahayn Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo hore u soo noqday Wasiirka Diinta iyo Ow qaafta.
Previous article[XOG] Loolanka loogu jiro Kursiga HOP064 oo galey weji cusub & Musharax looga yeeray Maxkamad
Next articleAl-Shabaab oo sheegatay dilka Guddoomiyihii hore ee Gobolka Hiiraan
[Faah Faahin] Wadahadallo u bilowday Rooble & Midowga Murashaxiinta